Ma La Kulmaysaa Waxyaabaha Laga Filayo Dukaamaysiga Macaamiisha Sannadkan? | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 25, 2014 Douglas Karr
Goorma ayey tahay inaad bilowdo dhiirrigelinta fasaxa? Ma qorsheyneysaa ololeyaal heshiis internetka ah? Miyaad hagaajineysaa bartaada si macaamiisha internetka ay si fudud u heli karaan fikradaha hadiyadda? Maxaad samaynaysaa si aad u sasabto dadka wax iibsanaya ee ah bandhigida si aad wax uga iibsato isla meeshaas? Ma haysaa macluumaad alaab kugu filan oo laga heli karo bartaada? Miyuu qolkaaga qolka internetka ku habboon yahay keydkaaga dhabta ah? Moobilkaaga mobilada iyo kaniiniga ah miyay khibrad kaa helaan?
SDL waxay daraasad ku sameysay macaamiisha 3,000 Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka, Nederland, Boqortooyada Ingiriiska, iyo Australia. Cilmi-baaristani waxay si gaar ah u eegaysaa xilliyada fasaxa ee soo socda iyo sida macaamiisha maanta ay ula falgalaan noocyada, halka ay inta badan ku hawlan yihiin iyo sida ay tafaariiqlayaashu u adeegsanayaan farsamooyin suuq-geyn cusub oo casri ah si ay ula macaamilaan.
Kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad wax ka qabato hadda maaddaama aan xawaare buuxa u galayno xilliga dukaamaysiga fasaxa 2014! Dhagsii dhanka infographic si aad ugala soo baxdo macluumaad dheeri ah sahanka.
Tags: 2014 xilliyada ciidahasahanka macaamiishafikradaha hadiyaddadukaameysiga ciidahajawaabsdlbandhigidakiniin